बालबालिकाको प्रशंसा गर्न नचुकौं : स्याबास पाएकै भरमा बन्न सक्छन् उत्कृष्ट — Imandarmedia.com
बालबालिकाको प्रशंसा गर्न नचुकौं : स्याबास पाएकै भरमा बन्न सक्छन् उत्कृष्ट
नारायण ढुङ्गाना, काठमाडौं । तपाईंले कहिल्यै बालमनोविज्ञानको बारेमा सोच्नुभएको छ ? उनीहरुको आनीबानी व्यवहारको विषयमा ध्यान दिनुभएको छ ? उनीहरुले गरेका गतिविधिबारे गहिरिएर सोच्नुभएको छ ? यदि छैन भने उनीहरुका क्रियाकलापबारे आजैदेखि ख्याल गर्ने बानी बसाल्नुहोस् । मनोविद्का अनुसार पाँच वर्षसम्म बालबालिकालाई आमाबुबाको न्यानो माया र साथ चाहिन्छ । तीन वर्षका बालबालिका जुनसुकै काम गर्न पनि अघि सर्छन् ।
चार वर्ष पुगेपछि आफ्नो सामानका लागि झगडा गर्न थाल्छन् । पाँच वर्षको पुग्दा अरुलाई हेप्न र हेपिन थाल्छन् । उसको होडबाजी शुरु हुन्छ । साधारणतया गलत र सही के हो भन्नेबारेमा विचार गर्न थाल्छन् । यो बेलामा अरुको नक्कल गर्ने र ठूला मान्छेले जस्तै क्रियाकलाप गर्ने रुचाउँछन् । चकचके र चुलबुले अवस्थामा बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर काम गर्न सकिएन भने उनीहरुमा दीर्घकालीन असर हुने बताउँछन् मनोविद् डा.नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना ।
उनका अनुसार नराम्रै काम गरेको भए पनि बालबालिकालाई प्रशंसा गर्नुपर्छ, ताकी उनीहरुको आत्मबल र जाँगरमा कमी नआओस् । ‘अभिभावकको निगरानीमा बालबालिकालाई उमेरअनुसारको काम गर्न दिनुपर्छ, दोहोरो सञ्चार गर्नुपर्छ, अरुका अगाडि राम्रा कुराको प्रशंसा गर्नुपर्छ, तब मात्रै उनीहरुको क्षमता विकास हुन्छ र आत्मबल बढ्छ, जसले भविश्यसम्मै बालबालिकालाई फाइदा पुग्छ’, डा.ठगुन्नाले भने ।
बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उनीहरुको मनोविज्ञान बुझेर अभिभावकले त्यहीअनुसारको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रारम्भिक बाल विकासविज्ञ मीनाक्षी दाहाल बताउँछिन् । ‘अहिले हाम्रो ध्यान उपचारमा केन्द्रित छ तर त्योभन्दा पहिले समस्या आउनै नदिन प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्न जरुरी हुन्छ’, डा.दाहाल थप्छन् । प्रारम्भिक बालविकासको सिद्धान्तले बालबालिकालाई गर्भावस्थादेखि आठ वर्ष हुँदासम्म विशेष महत्व दिएर उनीहरुका सर्वाङ्गीण विकासमा मद्दत पुग्ने गरी लालनपालन तथा हेरचाह गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । यसका लागि आमाबुबा र घरपरिवारको हेरचाह आवश्यक पर्छ ।
सेतो गुराँस राष्ट्रिय बाल विकास सेवाका अध्यक्ष पूर्वसचिव जयराम गिरीले प्रारम्भिक बाल विकासका लागि संस्थाले ‘बालमनोविज्ञान तथा व्यवहार विकाससम्बन्धी चित्रात्मक सहयोगी पुस्तिका’ प्रकाशन गरेको जानकारी दिए । पुस्तक सबैका लागि उपयोगी हुने खालको रहेको उनको भनाइ छ । पुस्तकको आज शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले विमोचनसमेत गरेका छन् ।